२ वर्ष खेर जान हुँदैन, चुनावमा जानपर्छ भनेर संसद विघटन गरेको हुँः प्रधानमन्त्री
-केपी शर्मा ओली-
'हामी यहाँ छौं' भन्ने वाक्यांश मैले कुन सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, उहाँहरूले कुन सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवधानिक भएको भनी हल्ला चलाइएको छ। एकपटक अदालतमा जागिर खाएकै भरमा यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर प्रचार गर्नुभएको छ। एकपटक जागीर खाएकै भरमा यस्तो तर्क गर्न मिल्छ र? पोहोर परार जागिर खाएका थिए, अहिले बिर्सिएर यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बसेको मानिसलाई म भन्न चाहान्छु सर्वोच्चलाई गलत ढंगले गुमराहमा पार्ने, गलत प्रचार गर्ने र धम्काउने कार्य गर्न उहाँहरुलाई सुहाउँदैन।स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कता जान पर्छ भनेर सिकाउन पर्दैन। सडकबाट तपाईं फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउनुपर्ने हो? संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने केही अजासुहरूले संवैधानिक इजलासले हुँदैन भन्नु भयो। कुन संविधानले भन्यो तपाईलाई हुदैन भनेर? तपाईहरुले जुन इजलास भन्यो त्यही चाहिने भए, जो न्यायाधीश भन्यो भन्यो त्यही चाहिने भए, जे फैसला चाहियो त्यही गर्ने भए अदालत किन चाहियो? अदालत नै चाहिएन। स्वतन्त्र न्यायपालिकको कदर गर्न सिकौँ। नारा जुलुस गरेर अपमानित गर्ने काम नगरौँ। राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि नबोल्ने भाषा बोल्नु भएकै छ।
अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन। म बहुमतको नेतृत्वले भनेपछि अर्को विकल्प नै छैन। अब कसरी हुन्छ? बहुमत मसँग छ। ६४ प्रतिशत मसँग भएको अवस्थामा चलाउन सक्दिनँ र प्रभावकारी हुँदैन र नयाँ ताजा जनादेश चाहियो भनेको हुँ। सुकेको रुखले फल दिन्छ भनेर २ वर्ष पालिराख्न हुदैन भनेर ताजा जनादेश भनेको हुँ। कुहिएको रुखलाई ताजा भनेर रुखमै टास्न खोजेर हुँदैन। वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुन्छ। यही मितिमै निर्वाचन हुन्छ। यसमा कोही पनि साथीहरु भ्रम र अन्योलमा पर्न जरुरी छैन।